Naciima Qorane oo Warbixn Murugo badan ka Qortay, Gabadh Burco lagu dhaawacay, Lana Geeyay Muqdisho! | KALSHAALE
Naciima Qorane oo Warbixn Murugo badan ka Qortay, Gabadh Burco lagu dhaawacay, Lana Geeyay Muqdisho!
Feb 11, 2019 - 6 Aragtiyood
Laascaanod ( Kalshaale ) Iyada oo magaalada Burco dhex maraysa ayaa askari xabbad ku furay bilaa sabab!! Dhawr qof ayaa ku dhaawacmay, iyada se keedu aad buu u darnaa oo halbawlaha ayay goysay. Waxba looma qaban karo e, debedda halla geeyo ayey yidhaahdeen Dkhakhaatirkii Burco iyo kuwii Hargeisaba. Waxa ay sii raaciyeen, 40% ayey lugteedu nooshahay oo haddii hadda la qaado waa la bedbeedin karaa.
Xamar ayaa la keenay. Dr kani na sidii kuwii hore yidhaahdeen ayuu yidhi waxba kama qaban karee Turkey halla geeyo. Weliba wuxuu ku adkeeyay, waa inaa degdeg loo qaado. Laakiin dhibi waxa ay ka dhacday Passport maba haysato!! Mana sugi karto oo lugtaba rejo weyn lagama qabo. Markii Passport kii la sameeyay visa hiina la saaray, Turkish airline waxa ay tidhi; afar iyo toban kun oo doollar (14,000$) haddii aydaan hadda bixinayn ma qaadayno!!! Isla maalintay sidaas yidhaahdeenba Dr kii xaal keeda la socday wuxuu yidhi, lugtu waa ay bakhtidee halla jaro!!! Sidii ayaa na lagu jaray.
Haddaba saddex wax ayaa aan aad isu weydiiyay mase ogi bulshadu in ay ila dareemayso. Shacabka reer Somaliland waa aynu wada og nahay in ay ama Baasaaboor Soomaali ku dhoofaan ama kuwo kale. Haddaba arrimaha siyaasaddu haynoo joogaan e, maxaa waax soo saarta Baasaaboor Soomaaliga looga furi waayay Somaliland si ugu yaraan naf dhimanaysa loogu badbaadiyo?
Dhakhaatiirta Ajinabiga ah ee dalka jooga haddii aanay fulin karin baahiyaha caafimaad ee loo tagayo debedda, weliba dalkoodii ay dadka u dirayaan, maxay waddan keenna ka qabanayaan?
Diyaaradda Turkish Airline ee shacabka dhiigga ka miiranaysa, maxaa hoos loogu eegi waayey? Ma se tolow og tahay dawladda Somalia? Mise warba kama hayso oo, wexeennu waa reer ba’oow yaa ku leh!??
Waxaa Qortay | Naciima Abwaan Qorane
Inaabti Hawshu ha socoto . Calankaaga buluuga ah ku faan. Cidka xigta ma leh . Reer waqooyi waa somalida dhabta ah ee Somaliya leh . Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Gabdhaha isaaqu waa Gob ee Ragooda ayaa maandooriyaha Jaadku waalay kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Hada ictiraafkii waa ka quusteen , car ha soo Hadal qaadeen kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Adeer Jamuuriyada Somaliya ilaahay uun baa ka awood badan , Hal taako oo dhulkeyga ah Somaliya kama tageyno .
Burco iyo Hargiesa waa Somaliya . Xoog iyo xeeladba waanu adeegsaneyna kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Nimco abwaan qorane waan ku salamay.
Waa gabadha kaliya oon ka bixin lahaa 200 boqol oo geel.
Waxaa ciil iga hayaa. Mr bahal markuu baxaayay fariin uguma aanan dhiibin. Waxaan filaa in uu soo aragyay.
Xaqiiqdii waa arin xanuun badan.
Aniga laftirkeygu su.aashaas waan weydiin lahaa madaxda Reer woqooyiga.
Qofka Reer woqooyiga ah ee rabo in uu dhoofo. Waxaa qasab ah in uu hello passabor somali ah.wuxuuna ku qasban yahan in uu garoowe aado ama xamar.
Bal qiyaaas inta qarash ah ee uga bixi karto markuu garoowe tago? Waa in uu safar galaa waa in uu hotel seexdaa. Weli qarashkii bassaborku waa dhiman yahay.
Hadaba sideey abwaanaddu sheegtay. Maxaa loo cadibayaa dadka shacabka ah?
Ma lakala saaro siyaasadda iyo arimaha daruuriga ah?
Weliba anigu waxaan ogahay berigii dowladdi xasan sheekh. Waxaa laysku dayay in xafiis baassaborada laga qaato hargeysa laga furro waxaa arinkaas ka sheqeynaayay gafoow laakiin madaxdii Reer woqooyi ayaa diiday.
Caqliga saliimka ah ayaa qabo. Ilaa lakala tegaayo ama laga heshinaayo in dadka masaakiinta ah loo asxaan falo.
Soomalidu waxay ku maahmaahdaa ilayn af aanad lahayn ma qabatid? Paas ka spmaliyada aanu jaarka nahay inoogama duwa passaporka ethiopia ama jabouti ay ina siiyaan oo waa la mid? Laakiin marka xamar ay siyaasadayso adeer jam somland way diidaysa jam somland iyadoon abaal ugu qabin xamar shacab u dhashay jam somland way qaadan waanay ku dhoofi markay soo gutaan danahoodana waa laga urun karaa oo wax macno ah ma leh waa hawl u taal madaxda jam somland ? Waxaanse jaclaan lahaa inaady qaataan passaporka ethiopia ama jabouti intaan aqoonsi heleyno mana dheera ogaalkay inshallah
Shacabka soomaaliyada aan jaarka nahay waa shacbi faqiira oon awood badan u lahayn qaadashada passaporka dalkan aan jaarka nahay u fiirsada iyadaa xamar ku qasban inay siiso shacabka jam somland waayo waa dhaqaale doon xamar ? Waxaanse soo jeedin lahaa inaan heshiis la galno laban dal ee walaalaheena oo kala ah jabouti iyo ethiopia oo shacabkeenu ku dhoofaan kuna soo noqdaan sidaasan codsan lahaa dawladda biixi inay waydiisato laban dal inshallaah mana dheera xiligii keenu shaqayn lahaa inshallah
Wiil somaliyeed says:
Eraygaas gabadha feker ahaantayda waanla qabaa waana eray ama talo hadaan lasiyaasadaynin fiican somaliya ama waykala gu i oo somaliya iyo somaliland ayay kala noqon ama way iskusoonoqon oo dibaa loogaheshiin labadubana heshiis unbay kusuurto gali doontaa midkood lagu heshiin doonaa lkn inta kahoraysa inaan danta shacabka lasiyaasadaynin ayaa haboon
Marka sawma haboona inta ama lakala guranayo oo laguheshiinayo ama la iskusoo noqonayo oolagu heshiinayo in aan lasiyaasadaynin waxyaabaha daruuriga ah ee shacabka caqabada kunoqonkara